5 zvigaro zvinogona kubatsira zviri nani kutarisa kushushikana / kudzivisa kushungurudzika
Yakatumirwa ne Tranquillus | Jan 6, 2018 | Kuvandudza wega
Inogara ichingopedzisira yakasvibiswa nehupombwe nekushushikana kwezuva nezuva? Iva an ace mubasa rayo. Usavhiringidzwa nekusvibiswa uye kusagadzikana kunogona kukupa iwe.
Uku kuratidzwa kwekusachengeteka kunogona kuita kuti iwe urasikirwe netsoka dzako chero nguva: ziya dikita, kumeso kutsvuka, kurasikirwa mundangariro, kunyangwe kutya kwekutya. Chirevo chakakosha chemuromo pamberi pevakuru vako? Kubvunzurudzwa nevatengi vakakosha kana kubvunzurudzwa kwebasa? Kana kunyangwe basa rako rezuva nezuva ... akawanda mamiriro ezvinhu anokuisa iwe mu "kushushikana" uye izvo zvinoita kuti iwe urasikirwe nezviwanikwa zvako.
Dzidza kuti ungazviita sei Ndinovonga mazano e turnkey andinokupa muvhidhiyo iyi ye3 min. Ivhidhiyo inobvira inokubatsira iwe zviri nani kubata nemamiriro ezvinhu asinganzwisisiki zvaunogona kuwana.
Muvhidhiyo ino uchawana mazano uye mazano achakubatsira kudzivisa kusazvidya mwoyo nekudzidza kuti ungashandisa sei zviri nani ..., uye zvose izvo zviri mu 5 chete:
1Kuteerera : Ivai nekuziva kushungurudzika kwenyu uye kuita zvinoenderana nekuraira zviri nani
2) Dambudziko : Ichokwadi here? Ndeipi iyo pfungwa yako ichifungidzira?
3) Fara : chimiro chako uropi hunoda kuenda ikoko uye hunochinja mamiriro ezvinhu anorwadza mumitambo! Hongu zvinogoneka ...
4) Kuziva nzira yokuti kwete : dzidza kune sarudzai miganhu yenyu uye uite kuti vanzwe vakakupoteredza.
5) yenyu manzwiro : vasunungure kuti vanzwe vaine chiedza uye vakagadzirira kufamba.
Iva nechivimbo ikozvino uye uzvisununguke iwe pachako.
5 zvigaro zvinogona kubatsira zviri nani kutarisa kushushikana / kudzivisa kushungurudzika November 21st, 2018Tranquillus
VERENGA Kushungurudzika, tora danho shure uye utaure manzwiro ako nenzira dzinovaka.
zvinoteveraShoko Mazano Pakutanga Chikamu-Chinhu Chine Zvokudya Zvegoridhe
Dzidza Zvimwe Zvichimbidzika uye Zviri nani Kuchengeta Musoro-Buda Pakupedzisira Kwekufa Kwebasa Rakaoma
Kushungurudzika, tora danho shure uye utaure manzwiro ako nenzira dzinovaka.